Microsoft Edge inouya kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft yatora chiyero chisina kujairika mavari, nekuti ne RemoteEdge isu tinokwanisa kumhanyisa Microsoft Edge browser paLinux
Nhasi chimwe chinhu chisina kujairika chaitika, sezvo Internet browser Microsoft Edge yakaziviswa ichasvika kuLinux masisitimu anoshanda, uye haisi kushandisa Waini, asi inoshanda Kutenda kune RemoteEdge chishandiso.
Ichi chishandiso chakaita sekuwana mukana kune Microsoft Edge browser, iyo yatinozowana kubva kune imwe Internet browser. Izvi zvichatibvumidza kushandisa Microsoft Edge pane chero sisitimu inoshanda, ingave iri Linux kana MacOSX.
Microsoft Edge kusvika nhasi, yaive yakasarudzika browser ye Windows 10, chimwe chinhu icho ne RemoteEdge chinonyangarika, kubvira isu tinokwanisa kuwana kubva kune mamwe masisitimu anoshanda kunyangwe kana chiri chaicho.
Izvi zvinoitwa nekuda kwe yakavakirwa paMicrosoft's Linux inoshanda system tekinoroji, ndokuti, muAzure. RemoteEdge ine akawanda maficha e Windows 10 browser, senge HTML5.
Ndinoziva idzi nhau dzinoita sedzisina musoro, nekuti unogona kunge uchifunga kuti nei uchida Windows browser paLinux. Mhinduro yacho iri nyore, sezvo iri bhurawuza inoitirwa vatambi vewebhu.
Microsoft inoziva kuti havazi vese vanoshandisa Windows 10 uye saka yakada munhu wese anogona kuvandudza Microsoft Edge zvinowedzeredzwa kunyangwe kana vasina kuisa Microsoft inoshanda sisitimu seWindows 10.
Kutenda neizvi ivo vanowana vanogadzira kwese kwavanobva uye nenjodzi gonesa kushambadza kune yako browser, uchitarisira kuwana vamwe vashandisi veWindows 10. Zvisinei, iyo browser usati wagadzirira, nekuti iyo yepamutemo vhezheni haizobuda kunze kupera kwemwedzi uno.
Kunyangwe chokwadi chiri ini handizive kuti chinganakidze sei kukudziridza kuwedzerwa kweiyo Anoteedzera browser kune yakashata Internet Explorer. Ichokwadi ndechekuti ini handisati ndamboshandisa Edge saka handingazive maitiro ekupa yangu maonero nezvazvo.
Uye newe.. Ndeipi pfungwa yako yeichi chiyero neMicrosoft uye RemoteEdge yayo? Unofunga kuti ichavafarira here kana kuti haina musoro?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Microsoft Edge inouya kuLinux
Chinhu chakanaka ndechekugona kuzviita neIE kuti ukwanise kuishandisa munzvimbo dzinokumanikidza kushandisa iyo chaiyo browser, senge masangano ehurumende muMexico, Spain uye ndine chokwadi chekuti mune dzimwe nyika kana nzvimbo dzewebhu dze makambani anoshandisa SAP kana akafanana uye kuti dzimwe nguva vanokutendera kuti upinde neFirefox kana Chrome uye dzimwe nguva hazvigoneke kuzviita asi iIE mune chero vhezheni uchishandisa inowirirana nzira inoshanda.
Ini ndangoshandisa Internet Explorer kunze kwekusungirwa kwemakore, ipo pasina imwe sarudzo. Handina kumbobvira ndashandisa Edge, uye ndinovimba handifanire kudaro. Ini handidi kuti Microsoft iise maoko muLinux, zvinondipa manzwiro akashata.
Iniwo kusavimba kuti Microsoft inoisa ruoko rwakanyanya muLinux. Ndinovimba zvese zvinoshanduka kuva chimwe chinhu chakanakira iyo Linux nyika
Nyika yakakura kwazvo uye isu tese tinokodzera, tinofanirwa kuvapa mukana tichifunga kuti hatifanirwe kuisa chero chinhu (ndinovimba).
lol kuvandudza microsoft browser.
Muchokwadi, iri idambe renharaunda yese, kana vakatenda isu tisingazive. : /
Ngatirambei tichitendera microsoft kutipa ingori crap.
Ndatenda asi kwete, maita basa ... siya izvi zvisina maturo kune vashandisi vako ... isu tese tinoda kuona mapurogiramu chaiwo ...
Kana izvo zvauri kuda kuona kuti peji rako rinotaridzika sei mune imwe bhurawuza, iwe une masevhisi pamambure ayo anokupa iwe skrini mumabhurawuza makuru ese uye neshanduro dzawo dzinonyanya kushandiswa ...
Zvakanaka hazvo haisi yemuno linux, zvakanyanya Microsoft-Linux iri kundikonzera kusavimba zuva nezuva.
chivava (@ chivava555) akadaro
Ini ndinokukoka iwe kuchinjira ku freebsd, Linux ichakurumidza kubva kuMicrosoft.
Pindura kuna abaddon sinnerman (@ abaddons555)
Azure haina kubva paLinux, TONTUX.
Dai Microsoft yainyatsotarisira kuti vanogadzira mamwe mapuratifomu vanogadzira Edge ingadai yakagadzira iyo multiplatform browser uye yaisazotipa mafufu.
@Andres Ndapota zivisa iwe usati watuka chero munhu. Edge inogona kunge iri "nyowani nyowani" (iyo ini ndinopokana zvakanyanya) asi zvinoita sekunge inogara nhaka matambudziko ekare uye ekare "quirky" nzira dzekududzira kodhi iyo iyo internet yaiputika yatove nayo. Iwe unongo fanirwa kuona kuti mapeji akagadzirwa sei neavaki veji anonyatsoteedzera HTML5 neCSS3 zviyero zvinotaridzika zvakakwana uye zvinotsanangurwa zvakafanana mumabhurawuza ese (ese asiri-microsof, zvinonzwisiswa) asi kana iwe uchimhanyira muEdge matambudziko anotanga, zvinhu kunze yekwere, yakarasika, kana kusango ratidzwa. Mukupedzisira senguva dzose iwe unofanirwa kupedzisira waita basa racho uchidzokorora uye nekugadzira vhezheni yeiyo yakakosha peji kuitira kuti riite serakanaka muEdge.
Pindura kuna webmaster
Ini ndiri mushandisi weLinux, asi ndanga ndichishandisa Edge pamawindows pamwe neMS SQL uye .net pane linux ... zvinoshanda uye bhurawuza rinovimbisa mushe ... hapana chekuita neanotsvaga, ini ndaedza iyo Android vhezheni uye zvakare inogutsa ... ikozvino, kana iwe uchida chikonzero chekushandisa Microsoft's browser pane linux?… chikonzero chimwe chete chatinoshandisa chrome
Juan Rincon akadaro
Nhasi, ingangoita 2019 Microsoft yakasiya zvinopfuura imwe nemiromo yakashama xD Zvinoitika kuti Windows 10 gadziriso yega yega iri nani, yakagadzikana, inoshandisa zviwanikwa zvishoma uye inonzwisisika uye inokurumidza pamwe nekuchinjika. Kana zviri zveEdge, ini ndakashamisikawo, ndezvekuti ini ndaona zvakanyanya kunaka nezve kubhurawuza iyo "yandakashandisa" uye seyekugadzira webhu ndinogona kutaura kuti inotondipa misoro shoma kupfuura Safari neFirefox, kunyangwe Chrome. Tsvagurudza, verenga uone kuti zvachinja sei. Pamusoro pezvo, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ichiri kushaya kumwe kukura, sekuwedzera izvo "izvo zvainazvo asi zvisipo" uye zvimwe zvinhu zvidiki.
Uye nezve Microsoft / Linux :) Ukaenda kugithub uchaona kuti Microsoft ndiyo kambani inobatsira zvakanyanya mukugadzirwa kwemahara software "kunyangwe iwe usingazvitende".
Pindura Juan Rincon
John Zamora akadaro
Parizvino (2019) iyo imwecheteyo nhau yakapihwa maererano nekutanga kweEdge asi iine injini yeChromium, iyo ichauya yakananga kuGNU / Linux. Ini ndinonzwa kuti kufarira kweMicrosoft muLinux kuri kuwedzera nguva dzese, ini ndinofunga kubva mumaonero angu kuti zvakanaka kune iyo indasitiri.
Pindura Jhon Zamora
Eng. Nyanzvi akadaro
Iyo yekutanga vhezheni yeEdge yaive fiasco - senge zvese zvese paMicrosoft. Iyo itsva vhezheni yeEdge yakavakirwa paChromium (Google Chrome yakavhurwa sosi purojekiti). Mune mamwe mazwi, zvakare Microsoft inoteedzera zvinhu zvakanaka zvevamwe uye inoita shanduko dzayo seIIS (kopi yeApache HTTD), Active Directory (kopi yeOpenLDAP) ... Zvaitarisirwa kuti vhezheni itsva yeEdge izoshanda Linux.
Pindura kuna Eng. Alchemist
Terrorin 1980 akadaro
Nguva dzese pandinoisa Linux distro, ndinobvisa inosemesa Firefox uye pachinzvimbo… Edge, pamwe neMicrosoft Teams uye Skype uye voila.
Pindura Terrorin 1980